Ciyaalka haboon iyo daryeelka ee Coleus
Coleus waa geedka ubax, laakiin waxaa loo qiimeeyaa wax badan oo ubax ah, sida cawska iyo caleemaha la helay. Si kastaba ha ahaatee, quruxda Coleus sidoo kale waa noocyo kale oo faa'iido leh. Waxay noqon kartaa gudaha iyo beerta labadaba, labadaba xaaladahaas kuma adkaan kartid xannaano, taas oo xitaa asaasiga ah la qabsan karo (dabcan, haddii uu fahmo beerista coleus).
Sidee si habboon u ilaalineysaa hoya guriga
Hoya - ampelnoe warshad, ayaa iska leh caleenta geedaha dufanka iyo laanaha. Waxa kale oo loo yaqaan 'wax yar'. Hoya wuxuu ku koraa Koonfurta iyo Koonfur Aasiya, Polynesiya iyo Australia. Xaqiiqo xiiso leh! Warshadda waxaa lagu magacaabaa aqoonyahanka Scottish-ga Brown ee sharafta saaxiibkiisa Ingiriisi ah ee Thomas Hoy, oo koray dhirta beeraha Duke of Northumberland.
Liiska noocyada ugu fiican ee heliotrope
Ubaxyo helotrope waxay ku farxi karaan oo kaliya quruxdooda, laakiin sidoo kale leh caraf udgoon oo udgoon. Goobta furan, waa la kobcin karaa dhirta sanadlaha ah, inkasta oo dheryihii ay ku kori karaan sida geedaha duurjoogta ah. Wadankeena, helikrot Peruvian waa kuwa ugu caansan, noocyada kuwaas oo laga wada hadlay qodobkan.
Cudurada ugu waaweyn iyo cayayaanka ee amaryllis: tallaabooyinka ka hortagga iyo daaweynta
Amaryllis wuxuu ka soo jeedaa Afrika, sidaas darteed ma qaboobi karo jiilaalka bannaankiisa - wuu dhiman doonaa. Waxay ku kobcaan geedo qalaad oo guriga ku yaal xayawaan daaqad ama u taagan ubaxyada, hawada u furan waxay noqon doontaa mid caafimaad leh oo keliya xilliga diiran. Dhibaatooyinka joogtada ah marka kor loo qaado amaryllis, sida loo cirib tirayo Inta badan, cudurada amaryllis waxaa sababa xaalado dhir aan habboonayn.
Guryaha Gloxinia ee guriga
Gloxinia waxaa jecel beeraleyda ubax badan oo loogu talagalay bouquets bacajooga ubaxa, xulashada weyn ee noocyo, dhalmo fudud iyo suurtagalnimada ah ee taranta. Gloxinia waxaa iska leh qoyska Gesneriaceae, qaab muuqda waa joogitaanka tuber. Ma taqaanaa? Xafiiska ilaalinta deegaanka deegaanka, Gloxinia, ayaa loo aqoonsaday inuu yahay caawiyaha ugu fiican ee la dagaallanka gaajada oksijiinta 20 ka mid ah dhirta gudaha ah ee ka qaybqaata daraasadda.
Shuruuda aasaasiga ah ee daryeelka ee sansevieroy
Sansevieria, ama sansevieria, waa qulqulo aan ciriiri ahayn oo qoyaan leh oo qoyan leh oo ka tirsan qoyska Asparagus. Waxay ku koraan savannas iyo subtropics ee Afrika, Ameerika iyo Aasiya. Waxaa jira 60 nooc oo dhirtaas ah. Sida ubax gudaha ah waxaa lagu qiimeeyaa aan qabyo ahayn.
Noocyada sansevieri iyo sharaxaadooda
Sansevieria waxay isku daraysaa noocyada 60-70 ee dhirta aan qallafsaneyn ee qoyska Agave. Warshadu waxay ku leedahay magaca Laatiinka ee ah amiirka Neapolitan San Severo, oo kor u qaaday horumarinta sayniska dabiiciga ah. In dabiiciga ah, dhirta ku koraan gobollada kulaalayaasha ee Asia iyo Africa iyo, thanks to muuqaalkiisa soo jiidashada iyo aan qabyo ahayn, wuxuu kasbaday jacaylka beeraleyda.
Sifooyinka ay ku koraan dhalinyaradu waa berrin bannaan
Stone Rose waxaa lagu magacaabaa geedka quruxda badan - dhalinyaro. Lagu tarjumay luuqad, waxa loola jeedaa "weligiis nool." Dhagaxgu wuxuu ku dhacaa jacaylka ubaxlayaasha sababtoo ah amniga rosettes caleen inta lagu jiro xilliga oo dhan iyo iska caabin ah dhaxan. Foomka asalka ah ee rosettes caleen iyo noocyada kala duwan ee midabkooda waxay siiyaan dhirta muuqaal qurxinta qurxoon.
Qaar ka mid ah Kalat gudaha ah
Calathea ayaa madax ka ah qoyska Maranta. Dunida waxaa jira 140 nooc oo dhir ah. Dhammaan noocyada Calatean waxaa laga heli karaa Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Mucjisada iyo taajka ah ee tufaaxa dhirta ayaa qurxin doona beertaada oo ku dar jilcan. Maqaalkani waxaad ka baran doontaa noocyada ugu caansan iyo noocyada kalathea. Ma taqaanaa? Calathea waxa laga tarjumay Giriig ahaan sida bas ah.
Sida loo koro rosemary on windowsill, beerto iyo daryeelka guriga
Maanta, rosemary waxaa loo isticmaalaa sida caadiga ah sida cuncunka cuntooyinka kala duwan, iyo sidoo kale warshad caafimaad leh. Muuqaal muhiim ah - waxaa suurtogal ah in lagu koro rosemary guriga guriga windowsill, inkastoo aan dhibaato lahayn. Ma taqaanaa? Waqtiyadii hore, Giriigta, Masriyiintii iyo Roomaanku waxay adeegsadeen buro.
Asparagus waa geed dheer oo caan ah oo loogu talagalay gaajo kasta. Qaar ka mid ah qaaradda yurub, waxay markii ugu horreysay u muuqatay in ka badan laba qarni ka hor. Laakiin dhowr sano ka hor, asparagus waxay la kulmeen muuqaal dhab ah oo caan ah - waxaa laga heli karaa guriga iyadoo ku dhowaad kasta oo wax iibsade ah. Laakiin maanta mawqifka this warshad cajiib ah lama ruxin dhan.
Qolalka Yucca Care Tips
Evergreen Yucca waxay leedahay ilaa afartan nooc ee dhirta. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay kala duwanaanshihiisa qaabka caleemaha (jilicsan, midab leh, la ruxay, lakabyo, qaab muuqaal ah), midabka (cawl, cagaar, brownish) iyo qaabka burooyinkeeda (jilbaha, baaqul). Nasiib darro, guriga dhexdiisa qolalka qolka dhifka ah marar dhif ah, laakiin dad badan ayaa ku guuleysta.
10 noocyada ugu badan ee yuqua
Yucca guri qurux badan leh ayaa lagu kala saaraa noocyo kala duwan oo leh kala duwanaansho farabadan. Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad kala-duwanaanta aqalka dhirta lagu koriyo, waxaan kuu soo jeedinaynaa in aad adigu iskaa-barato 10-ka nooc ee ugu caansan ee geedaha timirta ah. Yucca aloelita (Yucca aloifolia) Noocyada kala duwan ee yuqua, noocyada noocan ah ayaa ah kuwa ugu caansan, sababtoo ah soo jiidashada hoydan iyo maqnaanshaha dhinaca caleemaha.
Yucca: Isticmaal, Guryo Caafimaad iyo Meel Gaar ah
Yucca waa geed geed udub ah oo ka tirsan qoyska asparagus. Qalabka warshad waa hareeraha, oo ka soo jeeda noocyada qaar. Caleemaha waxaa la yiraahdaa yuqua, waxay ku xardhan yihiin geesaha. Ubaxyada dhirta waa kuwo ballaaran, caddaan ah ama kareem-midab leh, oo loo qaybiyey boodh. Midhaha ayaa leh qaabka sanduuqyada ama berry fareeshka ah.
Sida loola tacaalo cayayaanka azalea
Azalea, sida inta badan dhirta, waxay saameyn kartaa cuduro kala duwan iyo cayayaanka. Cuntadan quruxda badani waxay si dhakhso ah u lumi kartaa muuqaalkeeda, haddii cayayaanku aanu helin wakhtigaa oo uusan baabi'in. Maqaalkani wuxuu sharaxayaa cayayaanka ugu caansan ee warshadan iyo sida loola dagaalamo.
Noocyada kala duwan ee Beelaha iyo noocyo of dieffenbachia: sida loo doorto warshad guriga
Dieffenbachia waa dhir alwaax cad oo qurux badan oo leh dalal leh cimilo kulayleed. Dieffenbachia ayaa ku badan Koonfurta Ameerika, waxaa laga helaa Waqooyiga Ameerika. Dieffenbachia: sharaxaad guud ee warshadda Noocyo badan oo dieffenbachia ah, caleemo waaweyn, oo caleemo ah oo kor u kaca oo si kedis ah u kora. Midabaynta caleemaha waxaa lagu dhejiyaa dhibco, dhejis iyo qaabab.
Noocyada ugu caansan ee maqaarka (sharaxaadda iyo sawirrada dhirta)
Oxygen qol (Oxalis) iyo beerta xaaladaha dabiiciga ah waxaa laga helaa Yurub, Australiya, Afrika, inkastoo ah goobta Oxalis ay tahay Maraykanka. Tani waa warshad baadiyaha ah oo ka mid ah qoysaska cudura badan. Waxaa jira noocyada sanadlaha iyo inta badanba. Qoryaha loo yaqaan 'oxalis' (oxysis, oo loo tarjumay sida "dhanaan") ayaa la helay sababtoo ah caleemo ay dhadhanka dhadhanaysay.
Sida loo koro dracaena indoor, gaar ahaan daryeelka ee warshad qalaad
Dracaena waa mid ka mid ah dhirta ugu qarsoon ee gudaha. Waddankeedii - Canary Islands iyo kaymaha kulaylaha ee Aasiya iyo Afrika. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira qiyaastii laba boqol oo nooc oo ubaxyada ah, sida geedka timirta ah, oo magaciisu aanu caadi ahayn dhegahayaga. Xaaladaha intooda badan, waxay leeyihiin geedka geed, caleemo dhif ah oo aan caadi ahayn, oo la ururiyo xirmo.
Hooyo ee Dracaena qalaad ayaa ah Afrika. Qurxinta, ubax la mid ah ubax ayaa muddo dheer loo doortay beeraha ubax beerista guriga. Warshadu waa quruxsan tahay mana ahan mid madaxbannaan, laakiin mararka qaarkood waxay bilaabaan inay beerashada ubaxu ku yeeshaan dhibaatooyin. Aan u fiirsanno si faahfaahsan dhammaan sababaha macquulka ah ee dracaena u noqotaa huruud iyo lumiso caleemo.
Sida loo koro qoryaha guriga
Dhirta qulubka ah waxay ku koraan cimilada hoose ee Mediterranean, iyo sidoo kale Sahara, Himalayas, Guatemala iyo Oregon. Noocyada geedaha ka baxaya waxay ka mid yihiin qoyskada qashinka. Waxay leeyihiin faafitaanka ama qaabka "Piramidal". Cypress waxaa loo isticmaalaa sidii dhirta ornamental, koraya beeraha iyo beeraha. Ma taqaanaa?